Isikhova, nguSamuel Bjørk. Ityala lesibini leMunch kunye neKrüger | Uncwadi lwangoku
Inoveli yesibini kuthotho lweMunch kunye neKrüger.
USamuel Bjørk, igama elimbumbulu lombhali waseNorway UFrode Sander Øien (UTrondheim, 1969), sayina inoveli yesibini, Isikhova, ukusuka kuthotho lwakhe eneenkwenkwezi abaphandi base-Oslo, UHolger Munch kunye noMia Krüger. Lo mbhali ubhetyebhetye, ekwangumbhali wemidlalo yeqonga, imvumi kunye nomculi, ubonakalisile kwimidlalo eyahlukeneyo yobugcisa kwaye waguqulela uShakespeare.
Ngeencwadana ezimbini zangaphambili ezipapashwe ngempumelelo eNorway yakhe, Uthando lwePepsi (2001) kunye Isantya sakusasa (2009) Ndihamba ndedwa Yayiyeyokuqala eguqulelwe kwiSpanish. Impendulo entle kakhulu evela kubafundi kunye nabagxeki izise esi sihloko sesibini ngolwamkelo oluhle kakhulu. Y ifomula ibonakala isamsebenzela. IBjørk inokuzimisela njengegama elitsha lesalathiso yenoveli yolwaphulo-mthetho yaseNordic engaphelelanga.
Ewe, ngemvume yabalingane abafana ethile Jo Nesbø. Kwaye yile U-Bjørk ubonakala ngathi ufundile ubuchule malunga nokujija iyelenqe kunye nokuphathwa kakuhle. uphawu lomntu wakhe. Abalandeli abaninzi benoveli yeNordic yolwaphulo-mthetho abafunde bobabini ngokuqinisekileyo baya kuyibona loo nto ifanayo Isikhova, ngakumbi esiphelweni sayo.
2.1 Abalinganiswa abaphambili
Omnye elivisayo lifunyenwe likrwitshiwe ehlathini kwibhedi yeentsiba (isikhova) kwaye kumbindi wesangqa ngamakhandlela. Isebe lase-Oslo lokubulala liyalithatha eli tyala. Ngaphambili sidibana kwakhona ne el Umhloli Holger Munch. Akathandabuzi ukubuyela kowona mphengululi uphambili, Mia kruger. Kodwa uKrüger usekwimeko ethe-ethe kakhulu yengqondo ngokuthanda kwakhe ukuzibulala kunye neziyobisi kunye neepilisi notywala.
Uphando Yinto ekhangeleka ngathi yeyokubulawa kukamasiko macabre iya kuchaphazela ngokusondeleyo Amalungu aliqela eqela likaMunch. Y ukuya kuMunch naseKrüger ngokwabo.
Ukonwabisa kakhulu, gcina isantya, enezahluko ezimfutshane, iindawo ekulula ukuzifunda nezinomdla. Isingeniso sokuvula sisinika imvelaphi yebali elidlulileyo oko kuya kuba neziphumo ezibi ngoku. Kwaye abalinganiswa ababonakalayo basenza ngokuqhubekayo sikrokrela ukubandakanyeka kwabo okukhulu okanye okuncinci kwimeko. Ewe omnye wabo ngoyena nobangela, kodwa umbhali udlala amakhadi akhe kakuhle kunye ne-bluffs ngendlela eyiyo.
Abalandeli abamnyama ngokubanzi, kunye nezo zinto zibandayo ngokukodwa, baya kuthi balwamkele ulwakhiwo kunye nendlela yokuphosa amathambo kumfundi kuloo ngxelo i-agile kwaye ichanekile. Baza kuqhubeka nokudibana neqela lamagosa asebupoliseni abasazisileyo. Y mhlawumbi zizizathu ezinobunzima ngakumbi bokufunda le noveli. Unomdla wokusombulula ityala, ewe, kodwa umbuzo kukufumana ibhalansi phakathi kwesakhiwo kunye nabalinganiswa ngokuchanekileyo. UBjørk uyayifumana.
Uvelwano lwam ukusukela Ndihamba ndedwa waya kuHolger Munch. Enkulu, enentshebe kwaye eneminyaka engamashumi amahlanu, ubuntu bakhe obuthandekayo, obunokuqonda kodwa obunokuncipha bukhokelela ekubeni athandwe kwaye ahlonitshwe ngabo bangaphantsi kwakhe. Ephawulwe ngoqhawulo-mtshato lomfazi wakhe, akabubuyisanga ubomi bakhe bobuqu kunye. Ubuncinci ubudlelwane nentombi yakhe buhle kwaye, ngaphezu kwako konke, uyamthanda umzukulwana wakhe. Kodwa akagqibi ukugxila okanye ukuzibekela iinjongo, nangona evakalelwa kukuba unokwenene kunethemba. Eli tyala liya kukuchaphazela ngendlela yobuqu.
Ewe UMia Krüger, ukungazinzi okukhulu ngokweemvakalelo qhubeka umkhokelele kwimbono yokuzibulala. Akonelanga kuye, kwaye akakhathali, ukuthathwa njengeyona ilungileyo. Ukwiindawo ezinqamlezileyo zabaphathi bakhe, abamnyanzelayo ukuba afumane unyango ngengqondo kwaye agcine amandla akhe ngokuqaqamba. Nangona kunjalo, kunye Kolu luvo lwam lokuthobeka njengomfundi, yayisele ikrunekile kwinoveli yokuqala ukunyanzeliswa kombhali ekugxininiseni isimilo sakhe sokungcungcutheka ngokokude simangaliswe ngakumbi ngumahluko kubuchule bakhe bokuphanda.
En Isikhova ukuba ubumnyama besimilo buyaqhubeka nokunyanzeliswa. Simbona ephindaphinda ukuzibuza ukuba wenzani emhlabeni, efikelela kumaxesha apho kungekho nto kwaye kungekho mntu ubalulekileyo kuye. Kanye ukuya kulowo uzisa impendulo. Leyo ngongoma apho umlingiswa kaKrüger engandiqinisekisi. Ngoyena unamandla, ufuna ukubonakala ebuthathaka kwaye sonke siyazi ukuba uya kuqhubeka eyomeleleyo. Ukuqikelela kakhulu. Okanye sele ufunde amaxesha amaninzi kakhulu.
Eminye, ezisekondari ezibangqongileyo yima kwakhona. Inkqubo ye- Hacker Isazinzulu sekhompyuter uGabriel Mørk, igqala Ludvig Grønlie, elona ziko liphakathi leCurry, isela kunye nomngcakazi kwaye apha enengxaki yobudlelwane ... Bonke benza imifanekiso enomdla yabalinganiswa abanxibe ngokufanelekileyo abalinganiswa abaphambili. Kwakhona usapho lukaMunch okanye abarhanelwa abavela kwaye balahlekise umfundi. Abanye babo basebenza kakuhle, kodwa abanye bahlala bengaphambi kokwenza oko. Nangona kunjalo, iphazili lisonjululwa ngempumelelo.
Enye isampulu elungileyo yohlobo ngubani okwazile ukwenza indawo yakhe phakathi kwamagama amnyama amaninzi aphumeleleyo asele evela kumazwe abandayo eNordic. Ayindonwabisanga, mhlawumbi ngenxa yokuba ndingoyena mntu uphambili (kwaye ndikhetha eyindoda), kunababini babaphandi. Kodwa iyasebenza, igcina ukurhanela kwaye iphela ngovuthondaba olulindelekileyo. Kuyonwabisa kwaye kulula kakhulu ukufunda. Ngapha koko, yintoni ungayilandela indlela yeBjørk .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Isikhova, nguSamuel Bjørk. Ityala lesibini lika Munch kunye no Krüger